Ramon Calderon: 'Real Madrid Waxay Dooneysaa Saxiixa Mohamed Salah'
Home Horyaalka Ingiriiska Ramon Calderon: ‘Real Madrid waxay dooneysaa saxiixa Mohamed Salah’
Ramon Calderon: ‘Real Madrid waxay dooneysaa saxiixa Mohamed Salah’
Ciyaaryahankii hore ee Real Madrid Madaxweynaha Ramon Calderon ayaa sheegay in kooxda reer Spain ayaa weli xiiso u qabta saxiixa Liverpool weeraryahankeeda Mohamed Salah .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Masar ayaa dhawaan dhaliyay hadal heyn cusub oo ku saabsan mustaqbalkiisa isagoo ka dhawaajiyay inuu xiiseynayo ku biirista mid ka mid ah Madrid ama Barcelona.
Salah ayaa ku riyaaqay olole kale oo cajiib ah ka hor goolka Liverpool, isagoo dhaliyay 24 gool 36 kulan, waxaana qandaraaskiisa Anfield uu dhacayaa dhamaadka 2022-23.
Calderon, oo madaxweyne ka soo noqday Madrid intii u dhaxeysay 2006 iyo 2009, ayaa aaminsan in Los Blancos ay dooneyso inay Salah ku darto kooxdooda laakiin laga yaabo inaysan awoodin inay la wareegaan.
“Waa ciyaaryahan weyn iyo gooldhaliye,” Calderon ayaa u sheegay OnTime Sports . “Wuxuu ka caawiyay Liverpool inuu bixiyo waxa ugu fiican, laakiin uma maleynayo inay fasaxi doonaan.
“Waxaa la filayaa in, hadii ay ka fikiri lahaayeen, ay u ogolaan lahaayeen oo kaliya inuu ku baxo lacag badan. heshiiska waa in la dhammaystiro, wuxuu noqon lahaa mid muhiim ah.
Salah ayaa hogaaminaya gooldhalinta Premier League xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 17 gool, taasoo labo gool ka badan Bruno Fernandes .
Previous articleMan United oo u dhaqaaqi doonta saxiixa Raphael Varane hadii uu sameeyo arinkan
Next articleXiddiga Liverpool Mohamed Salah oo seegi doona bilowga xilli ciyaareedka 2021-22?